UNESCO yiri egwu iyipu Stonehenge nke World Heritage status
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » UNESCO yiri egwu iyipu Stonehenge nke World Heritage status
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • isiokwu Parks • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
N'ihi iwu okporo ụzọ dị n'okpuru ala, Stonehenge ga -enweta ọkwa nke ihe nọ n'ihe egwu, nke ga -esochi mwepu na ndepụta nke ihe nketa ọdịbendị.
Mwube okporo ụzọ na -eyi ọnọdụ ihe nketa ụwa nke Stonehenge egwu.
A kwadoro oru ngo okporo ụzọ dị n'okpuru ala na Nọvemba afọ gara aga.
Okporo ụzọ a ga -ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita atọ.
Stonehenge nwere ike tufuo ọkwa ya dị ka Ebe Ihe Nketa Worldwa n'ihi iwu ọwara n'okpuru akara ahụ, dị ka akụkọ na -adịbeghị anya.
The Nationstù Na-ahụ Maka Mmụta, Sayensị na Ọdịbendị nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNESCO) adọla ndị ọchịchị Britain aka na ntị na n'ihi iwu okporo ụzọ dị n'okpuru ala. Stonehenge ga -enweta ọkwa nke ihe nọ n'ihe egwu. Na nke a ga -esochi mwepu na ndepụta nke ihe nketa ọdịbendị.
Ministri Ụgbọ njem nke Britain kwadoro ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị n'okpuru ala na Nọvemba afọ gara aga. Emebere ya iji belata ibu okporo ụzọ nke okporo ụzọ A303. Okporo ụzọ a ga -ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita atọ.
Stonehenge bụ ihe ncheta akụkọ mgbe ochie na Salisbury Plain na Wiltshire, England, kilomita abụọ n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke Amesbury. Ọ nwere mgbanaka elu nke okwute sarsen kwụ ọtọ, nke ọ bụla dị mita iri na atọ n'ịdị elu, na -erukwa mita asaa n'ogologo, na -erukwa ihe dị ka tọn iri abụọ na ise.
N'ime ya bụ mgbanaka nke obere bluestones. N'ime n'ime ndị a bụ trilithons na-akwụghị ụgwọ, Sarsens kwụ ọtọ abụọ buru ibu nke otu lintel jikọtara. Ihe ncheta ahụ dum, nke na -emebi emebi ugbu a, na -aga n'ihu ọwụwa anyanwụ na anwụ anwụ. A na -edobe okwute ndị ahụ n'ime arụ ọrụ ụwa n'etiti nnukwu ihe mgbagwoju anya nke ihe ncheta Neolithic na Bronze Age na England, gụnyere ọtụtụ narị tumuli (ebe a na -eli ozu).
Ndị ọkà mmụta ihe ochie kwenyere na e wuru ya site na 3000 BC ruo 2000 BC. Akụkụ okirikiri na okirikiri okirikiri gbara ya gburugburu, nke mejupụtara akụkụ mbụ nke ihe ncheta ahụ, ka edegoro n'ihe dị ka 3100 BC. Mkparịta ụka rediocarbon na -atụ aro na ebulitere bluestones mbụ n'etiti 2400 na 2200 BC, n'agbanyeghị na ha nwere ike ịnọ na saịtị ahụ na mbido 3000 BC.
Otu n'ime akara ama ama ama na United Kingdom, a na -ewere Stonehenge dị ka akara ngosi ọdịnala Britain. Ọ bụ ihe ncheta echekwabara echekwara nke ọma site na 1882, mgbe ebidoro nke ọma iwu na -echebe ihe ncheta akụkọ ihe mere eme na Britain. A gbakwunyere saịtị na gburugburu ya na ndepụta UNESCO nke Ebe Ihe Nketa Ụwa na 1986. Stonehenge bụ nke okpueze na -ejikwa ya site na ihe nketa Bekee; ala gbara ya gburugburu bụ nke National Trust.
Ryanair nwetara uru asọmpi na Boeing 737 MAX